N'ogbe nnukwu dayameta flat hose na mmanụ nguzogide mmanụ, ịka nká na-eguzogide na oyi na-eguzogide Onye nrụpụta na Supplier |JL
Hose dị larịị buru ibu nke nwere nguzogide mmanụ, nguzogide ịka nká na nguzogide oyi
The nnukwu dayameta flat sooks adopts otu oge akpụ na co-extrusion usoro.Ọ mejupụtara akwa akwa rọba dị n'ime TPU, akwa akwa akwa akwa akwa na akwa akwa roba TPU.
Nnukwu dayameta larịị sooks
Usoro pụrụ iche
A na-agbakwunye eriri igwe na-eduzi na eriri eriri iji dozie nsogbu nke eriri.Igwe ọkụ eletrik kwụ ọtọ nke a na-emepụta n'oge usoro njem mmanụ na-ekwe nkwa n'ụzọ zuru ezu nchekwa nke njem mmanụ na oke arụmọrụ nke njem njem.Ọ nwere ike ibufe gas, mmiri, mmanụ na mgbasa ozi ndị ọzọ na-enweghị mmetọ na usoro njem.
Ojiji bara uru
Dị ka anyị niile maara, usoro ntinye mmiri dịpụrụ adịpụ bụ iji hụ na mmiri dị iche iche nke ndị na-agbanyụ ọkụ na-eme n'oge ọkụ ọkụ, n'ihi na ọ bụghị ebe niile ọkụ na-agba gburugburu ọdọ mmiri ma ọ bụ ọkụ ọkụ, nke na-achọ nhazi nke mmiri mmiri dịpụrụ adịpụ iji nye ya. mmiri si n'ọdọ mmiri dịpụrụ adịpụ na osimiri gaa n'ebe a na-arụ ọrụ ọkụ, ka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ nwee ike ịchịkwa ọkụ na oge.
Igwe ọkụ na-eji na mmiri dịpụrụ adịpụ na-akpọ engine ọkụ mgbapụta.A na-etinye mgbapụta mmanụ dizel n'ime isi mmiri ahụ, mgbe ahụ, a na-ebufe mmiri ahụ gaa na ọrụ mgba ọkụ nke mbụ site na eriri mmiri mmiri dịpụrụ adịpụ.Nke a bụ isi usoro nke mmiri dịpụrụ adịpụ.Ọkụ ọkụ na nnapụta abụghị naanị iji dozie nsogbu nke mmiri, kamakwa iji dozie nsogbu nke oge.The nnukwu eruba n'ime ime mmiri mmiri sooks nakweere otu-nzọụkwụ na-akpụ coextrusion usoro, na ogologo ogologo, adụ udidi na ngwa ngwa Ịtọkwa ọsọ, nke nwere ike ukwuu mma nnapụta arụmọrụ na ibelata nnapụta na-eri.A na-eji eriri mmiri dịpụrụ adịpụ eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ime ime obodo mberede mmiri mmiri na usoro drainage (nchebe ọkụ, mmetọ mmiri, idei mmiri, wdg), nke nwere ike dozie nsogbu nke mmiri na mmiri na mberede na mberede.
Nke gara aga: Ọkụ Na-agbaji Maka Mmepụta Mmanụ na Gas
Osote: A na-eji eriri mmiri mmiri kemịkal mee ihe na saịtị kemịkalụ dị iche iche